Maamulka Gobolka Banaadir iyo Madaxkale oo xalay Shacab badan kula dabaal degay Beerta Nabada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Gobolka Banaadir iyo Madaxkale oo xalay Shacab badan kula dabaal degay...
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Madaxkale oo xalay Shacab badan kula dabaal degay Beerta Nabada.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xalay Shacab Farabadan kula dabaal degay beerta Nabadda oo ka mid ah meelah ay isugu yimaadaan Bulshadda Soomaaliyeed.
Intii uu socday dabaal dega oo ahaa mid lagu xusaayay 1-da Luulyo ayaa Mas’uuliyiintii ka qeyb galay waxa ay shacabka ugu hambalyeeyeen Farxada Maalinta Xoriyadda Soomaaliya Sidoo kale waxa ay ugu baaqeen in ay dowladda kala shaqeeyaan xaqiijinta Amniga Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ka mid ah Mas’uuliyiintii ka qeyb galay dabaal dega ayaa Mas’uuliyiinta Beerta Nabadda ugu baaqay in ay Shacabka ka joojiyaan lacagaha laga qaado maadaama ay tahay goob dadweyne.
Previous articleDanjiraha Mareykanka oo sheegay in dowladda Soomaaliya isbedel weyn sameysay
Next articleWasiirka Arimaha Dibada Qadar oo si kulul ugu horyimid dalabkii loo soo jeediyey